FIrmware Download ဆွဲရန် အခက်အခဲဖြစ်နေသော နယ်မှ Service သမားများ အတွက် Harddisk အလွတ် ရှိယုံဖြင့် FIrmware များ ၀ယ်ယူနိုင်ပီ.. - မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
Home Unlabelled FIrmware Download ဆွဲရန် အခက်အခဲဖြစ်နေသော နယ်မှ Service သမားများ အတွက် Harddisk အလွတ် ရှိယုံဖြင့် FIrmware များ ၀ယ်ယူနိုင်ပီ..
FIrmware Download ဆွဲရန် အခက်အခဲဖြစ်နေသော နယ်မှ Service သမားများ အတွက် Harddisk အလွတ် ရှိယုံဖြင့် FIrmware များ ၀ယ်ယူနိုင်ပီ..
Min Oaker at 11:28:00 AM
Hello . .. အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါခင်ဗျ..
ကျနော် လက်ရှိ အခုရောင်းပေးနေတဲ့ Firmware list တွေ.Error Fix file လေးတွေနဲ့ ဈေးနှုန်းလေးကတော့ .အောက်ကအတိုိင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်.ခင်ဗျ.
စကားဦးအနေနဲ့ စမ်းပီးအောင်ထားသော Display Fix , Vibrate Error Fix , Mtk Dead Fix Firmware များနဲ့ Huawei Board Firmware များ ,Xiaomi Fastboot Rom(Pattern,Pin Remove Firmware)များ ပါဝယ်ယူနိုင်ပါပီခင်ဗျ. (CALL- 09792647058,09971558137)
လက်ရှိ တင်ထားတဲ့ Firmware များကတော့
နမည်ကြီး Brand တွေဖြစ်တဲ့ ..
- Xiaomi Firmware များအပြင် နမည်ကြီး brand တွေ နဲ့အတူ ပုံစံတူ ထွက်လာတဲ့ Clone Firmware များ
- Samsung Clone
- Huawei Clone
- LG Clone
- Xiaomi Clone
- Vivo Clone Firmware များအပြင် China ကလည်း ထုတ်သလားမမေးနဲ့ . ဆိုတဲ့ တခြား နမည်မရှိသေးတဲ့ Firmware တွေဖြစ်တဲ့
- G Five
- I Mobile
- MOMO Tablet Firmware
စတဲ့ Firmware တွေ ပါမှာ ဖြစ်ပါတယ် ..
1000 GB or 2000 GB Harddisk ထဲထည့် ပေးပါတယ်.
Harddisk ကို အရင် ပေးထားရမှာဖြစ်ပီးတော့ 1000 GB ကို ၂ ရက်ခန့်
2000 GB ကို ၄ ရက်ခန့် ကြာမှာဖြစ်ပါတယ်.
Harddisk ၀ယ်ဖို့ အဆင်မပြေသူများနှင့် နယ်က မှာယူချင်သူတွေအတွက်
ဘဏ်မှ တစ်ဆင့် ငွေလွဲရုံဖြင့် Hardisk + Data ပါ တစ်ခါတည်း အိမ်အရောက်ပို့ပေးပါတယ်. (ဒီလိုပြောလို့ လူစိမ်းတစ်ယောက်ကို ယုံဖို့ ခက်ပါတယ်. ဒါပေမယ့် မလွဲခင် ကျနော် အဲ့လို လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ လူတွေလည်း မနည်းတော့ပါဘူး သူတို့တွေကို ဖုန်းဆက်ပီး မေးနိုင်ဖို့ လည်း စီစဉ်ပေးမှာပါ)
Hardisk ဈေးနှုန်းတော့ ကိုယ့်နယ် မှာ တစ်ခါတည်းစုံစမ်းထားပါ.
ကျနော်ကတော့ YGN က ဈေးနှုန်းအတိုင်းပဲ ယူမှာပါ.
1000 GB (1 T Data) - 30000
2000 GB (2 T Data) - 50000
မှတ်ချက်။ 2000 GB ၀ယ်ယူအားပေးသော Customer များကို Huawei Board Firmware များ ၊ Xiaomi Pattern.Pin Unlock Firmware များ၊ Huawei mtk Dead Fix Firmware များပါ တစ်ပါတည်း လက်ဆောင် အနေနဲ့ ထည့်သွင်းပေးသွားမှာပါ..
2000 GB မ၀ယ်ချင်ဘဲ Huawei Board Firmware များ ၊ Xiaomi Pattern.Pin Unlock Firmware များ၊ Huawei mtk Dead Fix Firmware
တွေ သပ်သပ် လိုချင်လည်း ရပါတယ် ငွေကျပ် ၁၅၀၀၀ ဖြင့် လာရောက်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်.
ကိုအောင်ခန့် - 09792647058 , 09971558137
Facebook မှ တစ်ဆင့် ဆက်သွယ်ရန် -
Clash of Clans ( COC ) Update ဗားရှင်းသစ် 9.256.4
SAMSUNG ဖုန်းတွေ Root လုံးဝမလိုပဲ မြန်မာစာချိန်းဖို့ bat ဖိုင် SAMSUNG AIO Font Changer Video
ဂီတ ဝါသနာ ရှင်များအတွက် နားဆင်နိုင်သည့် apps
Xiaomi တွေကို Computer ကတစ်ဆင့် Online ကနေ Update လုပ်နိုင်မယ့် XioMiTool Online Update tool
Blog Archive June (17) May (80) April (47) March (13) February (5) January (18) December (40) November (18) October (3) September (11) August (20) July (41) June (41) May (23) April (20) March (22) February (23) January (28) December (21) November (57) October (59) September (72) August (111) July (181) June (146) May (136) April (289) March (234) February (227) January (154) December (90) November (107) October (105) September (90) August (146) July (119) June (96) May (158) April (89) March (114) February (193) January (156) December (154) November (133) October (87) September (57) August (78) July (73) June (61) May (48) April (49) March (78) February (292) January (130) December (124) November (117) October (153) September (240) August (178) July (154) June (136) May (141) April (112) March (97) February (149) January (93) December (39) November (11) October (46) September (13) August (4) May (2) April (3)